Amaphaphu phansi ngamanzi Ethekwini kusho uMasipala – Sivubela intuthuko Newspaper
Amaphaphu phansi ngamanzi Ethekwini kusho uMasipala
Kungesikhathi kulungisa ipayipi lamazi kwaMashu
UMASIPALA waseThekwini uthi amaphaphu phansi kwizakhamizi ezisenyakatho ebezingawatholi amanzi kulandela ukuqhuma kwamapayipi abewaletha kweminye imizi yezigceme ezakhele elokishini laKwaMashu.
Ukungabibikho kwamanzi kulezindawo ezisenyakatho kudale imvunge kubantu bekhala ngokuthi ngabe kuhle okungenani ukube bayaziswa uma ezonqamuka ukuze bazihlinzekele ngabazowasebenzisa ngesikhathi belindile.
Esinye isakhamuzi esikhulume naleli phephandaba esicele ukuba ligodlwe igama laso sinxuse ukubambisana kumasipala nomphakathi ngokuthi kube khona izinhlelo zokuwazisa ngezinto ezizowuphazamisa nokuthi umasipala uchaze ukuthi kwenziwani ngalokho ukuze abantu bakuhlomele. Lesi sakhamuzi sithe kulo ludaba lwamanzi ngabe kungcono ukube amakhansela aphumile asho ukuthi kawazukuba khona amanzi ngezinsuku ezithize bese uhlinzeka ngamaloli athwala amanzi ngesikhathi kulungiswa inkinga yokuqhuma kwamapayipi. “Asiphikisani nentuthuko kamasipala kodwa besicela singumphakathi ukuba kubanjiswane nathi. Siyacela ukuba kusetshenziswe zonke izindlela zokuxhumana nomphakathi ukuze sazi ngezinhlelo zikamasipala. Kulezi nsuku kulula ngoba sekusetshenziswa izinkundla zokuxhumana, kunemisakazo yomphakathi namaphephandaba umasipala ongabamba khona iqhaza ukusazisa ngokwenzekayo,” kusho lesi sakhamuzi.
UMnu Msawakhe Mayisela okhulumela uMasipala waseThekwini uvumile ukuthi bebeyazi indaba yokunqamuka kwamanzi ezindaweni ezisenyakatho yeTheku. “Ukunqamuka kwamanzi kudalwe ngukuqhuma kwamapayipi okuyikhona ukwenze ukuba kuphazamiseke ukuhanjiswa kwamanzi emphakathini. Siyabonga ngoba umasipala ukwazile ukusukuma ngokushesha wahlangabezana nokukhala komphakathi njengoba amanzi esebuyisiwe. Umphakathi uyacelwa wehlise umoya ngoba konke sekuxazululekile sebengawasebenzisa amanzi ngendlela yokuwonga,” usho kanje.
Injabulo kwizaguga zivakashela umkhandlu zingazelele
USIZI KUDLULA UMLANDELI WEBUCS